500 kiilo oo kookayn ah ayaa laga helay kafee Nespresso ah • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Dambi 500 kiilo oo kookayn ah ayaa laga helay shixnadda qaxwada Nespresso
albaabka Ties Inc. 7 May 2022
maqaal by Ties Inc. 7 May 2022
Booliska Switzerland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen 500 oo kiilo oo maandooriye ah. Dawooyinka ayaa lagu dhex qariyay inta u dhaxaysa bacaha digirta bunka ee warshadda Nespresso.
Shaqaale ka tirsan warshadda Romont ayaa u digay maamulka ka dib markii ay ka heleen budo cad oo ku jirta bacaha digirta qaxwaha. Booliiska ayaa markii dambe ka helay daroogo badan oo ku jira shan konteenar oo maraakiibta. Baadhitaan bilow ah ayaa lagu sheegay in shixnaddu ka timid Brazil.
Kokain kuma jiro koobabka Nespresso
Bayaan ka soo baxay Nespresso ayaa muujinaya in soo saarista qayb ka mid ah kaabsal kafeega ay si badbaado leh u tagtay koobabkuna aysan 'wasakhaysan'. "Waxaan rabnaa inaan u xaqiijino macaamiisha in dhammaan alaabtayada ay badbaado u yihiin in la isticmaalo," ayay tiri shirkadda kafeega. Cocaine-ka la qabtay waxa uu ahaa 80% saafi ah waxaana lagu qiyaasay qiimihiisu waddooyinku ku dhawaad ​​50 milyan oo Yuuro.
"Xaqiiqdii waa qabsasho weyn oo lagu hayo gobolka Fribourg, waxaad dhihi kartaa qabsi aan caadi ahayn," ayuu yiri Marc Andrey, madaxa gobolka amniga ee gobolka. The cocaine waxaa loo badinayaa in loo waday suuqa Yurub, sida ay booliisku sheegeen.
Xigasho: bbc.com (EN)
Thailand waxay ku kori doontaa geedo daawo ahaan
Beeraley iyo qaybiye xashiishada daawada...
Cannabis waxaa laga yaabaa inaysan waxyeelo u geysan wax soo saarka…